Gudiga Fulinta Ee XDSHSI Oo Maanta Shir Yeeshay. - Cakaara News
Gudiga Fulinta Ee XDSHSI Oo Maanta Shir Yeeshay.
Jigjiga(CN) Isniin.June.29.2015, gudiga fulinta ee Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga Soomaalida Itoobiya (XDSHSI) ayaa maanta shir kuyeeshay magaalada Jigjiga ee xarunta DDSI. Shirkan gudiga fulinta ee maanta ayuu qodobadiisu ahaa qiimaynta warbixinta xisbiga, qiimatynta warbixinta xukuumada, qiimaynta shantii sano ee lasoo dhaafay dhinacadii adkaa iyo dhinicii jilicsanaa iyo waxyaabaha mudan kudayashada, iyo ansixinta geedi socodka xukuumadeed.
Sidoo kale waxaa ajendayaasha shirka kamid ahaa sidii loo sagootin lahaa barlamankii hore islamarkaana loo siin lahaa xaqii mudadaas ay soo shaqeeyeen iyo kadoodista qorshaha shanta sano ee soo socota.
Shirkaas ayaa kubilaabmay jawi heer sare ah oo cilmiyaysan waxayna gudigu si xeel dheer uga doodeen qodobadaas sare kuxusan oo ahaa ajendayaasha shirka kadibna waxay isla meel dhigeen oo ay si heer sare ah isula qaateen dhamaan ajendayaashaasi.
Guddiga oo qodobadaasi si cilmiyaysan isula falan qeeyay ayaa sidoo kale meel isla dhigay geedi socodka iyo jihooyinka siyaasadeed ee shanta sano ee soo socota.
Xisbiga Dimuqraadiga Shacbiga Soomaalida Soomaalida Itoobiya (XDSHSI) ayaa shantii sano ee u danbaysay guulo taariikhi ah kasoo hoyiyay nabadgaliyada, horumarka, maamulka suuban iyo xidhiidhka dadwaynaha, waxaana xusid mudan in xisbigu uu hantay taageeradii abid ugu balaadhnayd ee dal iyo dibad maadaama uu isbadal iyo kago'naansho layimid, waxayna doorashadii 5aad ee dalka dhawaan kadhacday uu xisbigu ku hantay kuraasta baarlamanka heer deegaan iyo heer fedraal boqolkiiba boqol.
Isku soo wada duuboo shirkan maanta ee gudiga fulinta ee XDSHSI ayaa noqonaya mid sii dar dar galinaya geedigii hayaanka horumar ee xisbigu isbadalkan maanta ku gaadhay islamarkaana uu ku laba jibaarayo kalsoonida buuxda ee ay shacabka DDSI ku taageereen iyo gaadhsiinta yoolkooda dheer.